आसाममा २४ घन्टाभित्रै आठ नवजात शिशुको मृत्यु ,भारतीय अस्पतलामै नवजात शिशु मर्नुको कारण के ? - samayapost.com
आसाममा २४ घन्टाभित्रै आठ नवजात शिशुको मृत्यु ,भारतीय अस्पतलामै नवजात शिशु मर्नुको कारण के ?
समयपोष्ट २०७४ असोज २० गते ७:५५
भारतीय उत्तरपूर्वी राज्य आसामको एक सरकारी अस्पतालमा जन्मिएका नवजात शिशुमध्ये २४ घन्टाभित्रै आठ जनाको ज्यान गएको समाचार छ ।
भारतका विभिन्न अस्पतालमा यसरी नवजात शिुशुको ज्यान जाने गरेका समाचारहरु पछिल्ला केही समययता आइरहेका छन् । यसरी शिशुको मृत्यु हुने गरेको भारतीय दुःखद खबरमा आसामको यो पछिल्लो उदाहरण हो ।
आसामको सरकारी अस्पताल फखारुद्दिन अलि अहमद मेडिकल कलेजमा जन्मिएका ती शिशुको बिहीबार बिहानसम्म २४ घन्टाभित्र ज्यान गएको हो । सोही अस्पतालमै जन्मिएका ती शिशुको ज्यान गएको समाचार उक्त अस्पतालका अधिकारीहरुले पुष्टी गरेका छन् । असामको बारपेटा जिल्लामा रहेको सो अस्पताल दिसपुर जिल्लाबाट करिब १०२ किलोमीटर टाढा पर्दछ । तीन जनाको बुधबार बेलुका र अरु दुईको बिहीबार बिहान मृत्य भएको समाचारमा जनाइएको छ ।
ती आठजना शिशुको ज्यान गएको घटनाको आवश्यक छानबीन गर्न आसामका स्वास्थ्यमन्त्री हिमन्त विश्व शर्माले आदेश दिएका छन् । तर चिकित्सक र अस्पतालका अधिकारीहरुले उनीहरुमा जन्मिदै अक्सिजनको कमी भएको र ज्यान गएको बताएका छन् ।
स्वास्थ्यमन्त्री शर्माले अबदेखि सो अस्पतालमा यस्तो घटना नदोहोरियोस भनेर के कति कारणले उनीहरुको ज्यान गएको हो भन्ने बारेमा अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको समाचारमा उल्लेख छ ।
उनले भनेका छन्– चिकित्सक एवम् स्थानीय अस्पतालका अधिकारीहरुले लापरवाही भएको भन्ने समाचार स्वीकार नगर्ने गरेकोले स्वतन्त्र रुपमा तथ्य आओस भनेर हामीले युनिसेफका विज्ञहरुलाई पनि अनुसन्धानका लागि पठाएका छौँ ।
गत महिनामात्र पनि उत्तरी भारतीय राज्य उत्तरप्रदेशको एउटा सरकारी अस्पतालामा मात्र एकै महिनाभित्र ४९ जना बालबालिकाको मृत्यु भएको विषयमा अनुसन्धान सुरु गरिएको अधिकारीहरुले जनाएका थिए । तर त्यसको तथ्य भने बाहिर आएको छैन ।
उनका अनुसार सो अस्पतालमा त्यति ठूलो सङ्ख्यामा के कसरी बालबालिकाको ज्यान गएको छ भनेर खोजी गरिने छ । यस विषयमा सर्वसाधारणमा व्यापक मात्रामा चासो बढेको छ । उनीहरुले संगठित रुपमा नै यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । रासस/सिन्ह्वा